जान्नुहोस ! कुन राशिका लागि “भ्यालेन्टाइन डे”मा कस्तो जोडी ? « Pariwartan Khabar
जान्नुहोस ! कुन राशिका लागि “भ्यालेन्टाइन डे”मा कस्तो जोडी ?
6 February, 2018 9:11 am
मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन पराउन सक्छन्, यद्यपि त्यो आकर्षण प्रेमका कारण भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा आकर्षणको अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ। जे होस्, मेष राशिका लागि आकर्षणको पहिलो केन्द्र सिंह राशिसँग हुन्छ भने लामो समयपछि मकर र कुम्भसँग हुन्छ। मेष राशिका व्यक्तिहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्दा बिहानको समय रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। धेरैजसो युवा बेलुकीपख प्रेम प्रस्ताव राख्छन्। यो मेष राशिका लागि लाभदायक हुँदैन। मेष राशि सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले सूर्योदयसँगै प्रेम प्रस्ताव राख्नु उपयुक्त हुन्छ। मन्दिरमा पूजा गर्ने निहुँले भेट्नु दुवैका लागि राम्रो हुन्छ। सूर्योदयका बेला दुवैजना आ-आफ्नो घरमा हुने भएकाले त्यही बेला भेट्न असम्भव भएको अवस्थामा फेसबुक वा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट प्रपोज गरे पनि हुन्छ। यो राशि भएका व्यक्तिहरूको लेखाइभन्दा बोली बढी प्रभावकारी हुने भएकाले म्यासेजभन्दा बोलीको प्रयोग गर्नु बढी हितकर मानिन्छ।
यो राशिका लागि सर्वाधिक प्रिय राशि मिथुन हो। मेष र मकरसँगको प्रेमसम्बन्ध पनि सकारात्मक रहन्छ। यो राशि भएका व्यक्तिले प्रेम प्रस्ताव राख्ने उत्तम समय साँझ ६ देखि ९ बजेसम्म मानिन्छ। बिहानै पे्रम प्रस्ताव राख्ने हो भने आफ्नो शयन कक्षको पूर्व उत्तर कुनामा फर्किएर म्यासेज वा अन्य विद्यूतीय सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रेमप्रस्ताव राख्दा सुन्तला वा कलेजी रङ्गका पहिरन लगाए पे्रम सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। उपहारका लागि अर्धतरल पदार्थबाट बनेका सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पो, तेल, क्रिम, लोसन आदि प्रभावकारी हुन्छन्। भ्यालेन्टाइन कार्डका रूपमा सुन्तला तथा कलेजी रंगको खोल एवं मधुरो अक्षरमा लेखिएका अण्डा आकारको कार्ड दिनु राम्रो मानिन्छ। खानेकुरामा मिक्स आइटमले सजिएका परिकार ख्वाए माया बराबर हुने विश्वास गरिन्छ। यो राशि माथि मंगल ग्रहको प्रभाव रहने हुँदा डेटिङ जाँदा खुला जमिनमा बसेर दुःख सुख साटे आगामी जीवन सुखमय रहनेछ। यो राशिका व्यक्तिले माया व्यक्त गर्दा न्यानो अगालोमा बाँध्नु उपयुक्त हुन्छ।